Nieritreritra i Polo Lacoste ary noforonina hatry ny ela. Efa hatry ny ela ny orinasa hafa dia nanararaotra imbetsaka mba hamoronana ny safidiny ho an'ny modely fanta-daza. Fa Renee Lacoste no voalohany ary mandraka androany dia mbola manam-pahefana foana eo amin'ny tsenan'ny akanjo ho an'ny fiainana sy ny "fanatanjahantena tena mahay".
Ahoana no hanavaka ny polisy Lacoste?
Ny fangatahana dia manondro ny tolotra, ary ny isan'ny replicas sy modely malaza amin'izao fotoana dia mahatratra haingana be. Misy vokatra tena ambany ny vidiny, ny vidin'ny fividianana amin'ny tsenan'ny Shinoa dia tsy latsaky ny dollar. Misy lafo kokoa - misy vatofantsika mendri-kaja kokoa, vita tsara vita vita amin'ny embroidery sy ny sisa. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny tarika Lacoste tany am-piandohana dia azo raisina aorian'ny fampiasana vinaingitra vitsivitsy: vetivety dia vita ny fofona, mihintsy ny fingon-java-maniry, manjavona ny endrika ny endrika. Mba hampidirana azy amin'ny endriny tany am-piandohana dia ilaina ny miara-miasa amin'ny vy sy ny paompy.
Ny logo avy amin'ny tarika Lacoste tany am-piandohana dia tsy voatery ho maitso - mety afaka miova arakaraka ny fanangonana. Ao anatin'ilay akanjo lava fohy marevaka nohavaozina Crique Pique Polo, ohatra, ny logo dia vita amin'ny fomba hafa tanteraka ary lehibe kokoa noho ny mahazatra. Ao amin'ny fanangonana ny Club, ny voay dia hafa ihany koa, mahatsiaro ny endriny voalohany. Noho izany rehefa mifidy ny polo polo Lacoste, dia tandremo bebe kokoa ny kalitaon'ny fanamafisana fa tsy ny fandrefesana ny modely.
Ny fiovan'ny karazana fiaramanidina Lacoste dia samy hafa tanteraka, na dia eo aza ny fisehoana eo amin'ny lafy tsara rehetra. Ny sasany dia fanatanjahantena fotsiny, ny hafa dia matanjaka kokoa:
Classic polo amin'ny bokotra . Voafandrika eo amin'ny tendany izy io. Vokatry ny kodiarana kely misy elastane kely.
Modely tsy misy bokotra . Manana kavina madio sy mangalatra. Volo tsara tarehy amin'ny loko fotsy misy fotsy hoditra mainty sy fotsy. Amin'ny alàlan'ny fanamainana tsotra, tsy ara-dalàna. Azo atao amin'ny landihazo na ny viscose, izay ahitana ny firavaka volonondry, modal na cashmere.
Polo blouse . Ny maivana sy ny tebiteby dia manome endrika modely tsara sy mahatalanjona. Ny kofehy amin'ny modely toy izany, na izany aza, dia ara-dalàna, mitafy. Fitaovana: viscose, silk.
Polo misy V-neck . Safidy ho an'ireo tia ny decollete. Mijery tsy ara-dalàna, style - casual. Ny lamba vita.
Ny lobaka polo ny Lacoste rehetra dia aseho amin'ny halavany 4 heny:
Ho an'ny vanim-potoana mafana, ny akanjo tena izy dia ny akanjo lava ny Lacoste. Tena tsy ara-dalàna, avy amin'ny fitaovana voajanahary, dia hanampy amin'ny fotoana rehetra raha mila mandeha mividy, mihaona amin'ny namana ianao, mandehana any an-dranomasina na mandeha miaraka amin'ny alika.
White gipure dress
Atsofoka eny amin'ny lampihazo
Long skirt denim - inona no tokony harahina sy ny fomba hamoronana sary maoderina?
Miakanjo miaraka amin'ny vorondolo
Jojoba solon'ny tarehy
Manicure amin'ny endriky ny vatolampy
Salady avy amin'ny avocado sy voatabiha
Mofomamy miaraka amin'ny renirano
Akanjo maivana maivana
Ariana Grande ao anaty kiraro
Fanomezana Krismasy: ny kintana dia nitarika ny fandresen'i Mariah Carey «Izay tiako ho amin'ny krismasy»
Tazonina anaty tavoahangy ao anaty siny
Barbados - fialan-tsasatra